Uzovela obefuna ukuthwala ngonkosikazi | isiZulu
Uzovela obefuna ukuthwala ngonkosikazi
Umshumpule ikhanda efuna ukuthaka ngalo umuthi
Ngicela ukusebenzisa umuthi ejele - Gcabashe
Unqunyelwe ukucwiyelwa umuthi - Umndeni
Mayfield - Kulindeleke ukuthi ivele eNkantolo yeMantshi yaseBenoni indoda esolwa ngokubulala unkosikazi wayo ngokumshumpula ikhanda ngoba ifuna ukumsebenzisela umuthi e-East Rand, kusho amaphoyisa aseGauteng.
Uboshwe ngesikhathi ikhanda likankosikazi litholakala endaweni yokugezela, isidumbu sakhe sisegumbini lokulala emzini wabo oseMayfield, eDaveyton, kusanda kuba yiphakathi kwamabili ngoLwesibili, kusho uCaptain Alfred Nakana.
“Uthe ikhanda likankosikazi ubezoliyisa KwaZulu-Natal nalapho abezolisebenzisela khona umuthi wokuthi abe yinjinga,” kusho uNakana.
Le ndoda ibihleli nomndeni wayo ngesikhathi ithi izingane aziye kolala, yabe isigwaza ibulala unkosikazi wayo yamshumpula ikhanda.
Ibhadanywe yindodana yabo, 15, nebese iphuma iyofuna usizo kanti izozithela evenini yamaphoyisa.